August 2013 ~ Zawlin IT World
Enable Administrator account in Windows 8 & Windows 7
9:38 PM software မြို့ တော်, windowဆိုင်ရာ, နည်းလမ်းများ 1 comment
Administrator အကောင့်ဖွင့်နညိးပါ ရှယ်တာနော်
To run Command Prompt in administrative mode in Windows7operating system go to:
1. Start > All Programs
2. Click to expand Accessories.
2. Right click on Command Prompt and choose "Run as administrator"
Inside the command prompt window, type the following command:
net user administrator /active:yes and press "Enter".
ဒါက Windows 8
To run Command Prompt in administrative mode in Windows 8 operating system: 1. Right-click at the screen's bottom-left corner and from the pop-up menu, choose "Command Prompt (Admin)
Posted by လူဆိုးလေး အောင်ကျော်
Posted by .ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ
IMobile IQ9 ကိုအလွယ်တစ်ကူ Root လုပ်နည်း
9:29 PM i mobile, mobile ဖုန်းဆိုင်ရာ, software မြို့ တော် No comments
Imobile IQ9 ကို Root လုပ်ခြင်တဲ့ ဘော်ဒါများအတွက် အခုနောက်ပိုင်ထွက်လာတဲ့ Imobile တွေ
အရင် IQ မော်ဒယ်တွေလို Root လုပ်ရမခက်ခဲတောပါဘူ အရင်ဆုံးပေးထားတဲ့ Driver ကို ဒေါင်းပြီ ကွန်ပျူတာမှာ သွင်းပေးလိုက်ပါ
Imobile iQ9 usb driver ကိုဒေါင်းရန်
Root Tool ကိုဒေါင်းရန်
ပြီရင်ဖုန်း usb settings တွေကို ၀င်ပြင်းပေးလိုက်ပါ
ဒေါင်းထားတဲ့ zip ဖိုင်ကို zip ဖြည့်လိုက်ပါ ဒီပုံအတိုင်တွေ့ ရပါမယ်
ပြီရင် ဖုန်းကို computer နဲချိတ်ပြီ run ဆိုတဲ့နေရာမှာနှိပ်ပေးလိုက်ပါ ဒီပုံအတိုင်ထက်တက်လာပါမယ်
ပြီရင် enter နှိပ်ပေးလိုက်ရင် phone က reboot ကျပြီ ပြန်တက်လာရင် superuser app လေးရောက်နေပါမယ် ဒါဆို Root လုပ်လို့ အောင်မြင်ပါပြီ
post by SmartGhost
post by .ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ
Samsung Galaxy phone/tablet တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူRoot လုပ်နည်း
9:25 PM Samsung, software မြို့ တော် No comments
Samsung Galaxy phone/tablet တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူRoot လုပ်နိုင်တဲ့ Root Apk လေးတစ်ခုနဲမိတ်ဆက်ပေးပါမယ် တောတောများများ ဒီ apk လေးကိုသိကြမှာပါ
အခုမှ samsung galaxy phone/tablet တွေ စသုံးတဲ့ ဘော်ဒါတွေ Root ဖောက်ဖို့ တိုင်ပတ်နေတဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက် computer မလိုဘဲ အလွယ်တစ်ကူ root ဖောက်လို့ ရပါတယ် ကျွန်တော် samsung tablet/phone တောတောများများစမ်ပြီသွားပါပြီ အာလုံးအဆ်ပြေပါတယ် အရင်ဆုံး root မလုပ်ခင်မိမိဖုန်းကို အင်တာနတ်ချိတ်ပေးထားရပါမယ်
Root Apk ဖိုင်းကိုဒေါင်းရန်
ပြီရင် zip ဖြည့်ပြီ အထဲက apk ဖိုင်းကို ဖုန်းထဲကိုသွင်းပေးလိုက်ပါ
ဒီပုံအတိုင်တက်လာပါမယ် ဒါဆို Root device နေရာမှာနှိပ်ပေးလိုက်ပါ
ဒါပုံတက်လာပြီဆိုရင် Grant နေရာမှာနှိပ်ပါ
SuperSU app လေးတက်လာပါမယ် ဒါဆို SuperSU app ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါ
ဒီပုံအတိုင်တက်လာပါမယ် ဒါဆို Continue မှာရွေးပေးလိုက်ပါ
ဒါဆို root ဖောက်လို့ အောင်မြင်ပါပြီ
I Mobile IQ5.3 ကို root လုပ်နည်း
9:10 PM i mobile 1 comment
I Mobile IQ5.3 ကို root လုပ်ခြင်တဲ့ ဘော်ဒါများအတွက်........
အရင်ဆုံး root မလုပ်ခင် IQ 5.3 ရဲ့ usb driver ကိုအရင်သွင်းထားရပါမယ် driver မရှိသူများ
I Mobile IQ5.3 USB Driver ကိုဒေါင်းရန်
Driver သွင်းပြီပြီဆိုရင် Root လုပ်ဖို့ အတွက် Phone ရဲ့ Settings USBတွေကို ပြင်ပေးလိုက်ပါ
ပြီရင်ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာနဲချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါဒါဆို Root လုပ်ဖို့ အတွက် Root Tool ဖိုးဒါထဲက
ပြီရင် ဒီလို အကွက်လေတက်လာပါမယ်
ဒါဆိုenter ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပြီ ခဏစောင့်ပါ Root tool က root ဖောက်ပြီဆိုရင် ဖုန်းက Reboot ကျပြီပြန်တက်လာရင် Superuser app လေးရောက်နေပါပြီ ဒါဆို root လုပ်လို့ အောင်မြင်ပါပြီ
post .ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ
ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ ကွန်ပြူတာကနေ wifi ပြန်လွင့်ကြမယ်
12:53 AM software မြို့ တော်, wifi, windowဆိုင်ရာ No comments
ကွန်ပြူတာအသုံးပြုသူတိုင်းဆောင်ထားသင့်တဲ့ software လေးတစ်ခုပါအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မိမိရဲ့ အင်တာနက်ကို တစ်ခြားသူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုပြန်လည်ခွဲဝေချင်တဲ့ အခါမှာဒီနည်းလမ်းလေးကိုသုံးပြီး
wifi ပြန်လွင့်ပေးလို့ ရပါတယ်။အရင်ဦးဆုံး VirtualRouterPlus 2.3.0 Stable version ကိုအောက်ကလင့်လေးမှာဒေါင်းလိုက်ပါ
<<<< Home page download >>>>
<<<< solidfiles >>>>
<<<< tusfiles >>>>
သတိ tusfiles ကဒေါင်းမယ်ဆို Download with TusFiles accelerator and get recommended offers ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှက်ခြစ်လေးဖြုတ်ပြီးမှဒေါင်းပေးပါခင်ဗျာ
ပထမဆုံးအနေနဲ့မိမိတို့ ကွန်ပျူတာမှာ အင်တာနက်ခွဲဝေဖို့ ကို wifi ကိုဖွင့် ထားရပါမယ်ခင်ဗျာ
အဆင့် (၁) software ကိုဖွင့်ပြီးမီမိနာမည်နဲ့ password ကိုကြိုက်တာပေးလိုက်ပါ
အဆင့် (၂) share connection နေရာမှာမိမိ share လုပ်ချင်တဲ့wifi adapter တစ်ခုခုကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
Zawlin IT World ဘလော့ကို လာကြည့်သူအပေါင်းတို့ ကိုယ်စိတ်နှလုံးရွှင်လန်းကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျှက်ပါ၊
အောက်ဖော်ပြပါ ကြော်ငြာကို တစ်နေ့တစ်ကြိမ်မျှ Click ပေးခြင်းဖြင့် ပြန်လည်ကူညီပေးပါခင်ဗျာ
ဒီစာအုပ်လေးတွေက နည်းပညာကိုစလေ့လာ နေတဲ့ သူတွေအတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင် ပါဘူး..အဖွားတော့ ဟုတ်ဘူးနော်..:P ကောင်လေးဆီမှာ ရှိနေတဲ့ စာအုပ်လေးတွေ က...
Bagan Keyboard Beta (Zawgyi+English)
Bagan Innovation Technology မှ Android Phone နှင့် Tablet များအတွက် မြန်မာလက်ကွက်စနစ်( Zawgyi Font )နှင့် English လက်ကွက်စနစ်ပူးတွဲပါရှိေ...
I Mobile I style Q3 ကို offical firmware ပြန်တင်နည်း
I Mobile I style Q3 ကို firmware ပြန်တင်ခြင်တဲ့ ဘောဒါများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ကျွန်တောကိုတောင်ထား တာတော့ကြာပါပြီ Imobile က offica...
I . C (ယေဘူယ ခွဲခြားနည်း) ၁ ။ POWER I.C ခွဲခြားရင် ဘေးမှာ POWER Crystal ရှိတယ် Capacitor တွေအများကြီးရှိတယ် ၂ ။ Nokia မှာ Second Po...
INTERNET DOWNLOAD MANAGER (IDM) 6.12 BETA BUILD2(CLICK နှစ်ချက်နှိပ်ပေးရုံနဲ့ အမြဲတမ်းသုံးလို့ရမဲ့ IDM V6.12 BATA 2)
Internet Download Manager hasasmart download logic accelerator that features intelligent dynamic file segmentation and safe multipa...
BlueStacks App Player (Android app game တွေကုိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာသုံးကြမယ် )+အသုံးပြုနည်း
Android ဖုန်း/Tablet ဆော့ဝဲတွေကုို ကွန်ပျူတာပေါ်မှာသုံးလုို့ရစေတဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ။ Android ဖုန်း/Tablet မရှိသူေ တွလည်း android app တွေကုို...
ကွန်ပျူတာ အခြေခံ မိတ်ဆက် (မြန်မာလို)
မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ ကွန်ပြူတာအခြေခံ စာအုပ်လေးပါ။ ခုမှ ကွန်ပြူတာကို စ,လေ့လာ သူတွေအတွက် ယူထားသင့်ပါတယ်....။ိDownload ယူရန် http://www.mediaf...
LG Optimus L7 (P-705)ကို root လုပ်နည်း
LG Optimus L7 ကို root လုပ်မဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် အရေကြီးတာ phone driver ပါ ဖုန်း driver မရှိရင် root လုပ်လို့ ဘယ်လို့ မှမအောင်မြင်ပါဘ...
ကွန်ပျူတာ software အသုံပြုသူ အတွက် မြန်မာဘာသာပြန်စာအုပ် လေးတွေပါ လိုအပ်တဲလူတွေ အောက်ကနေ ဒေါင်သွားလိုက်ပါ ဒေါင်ရန...
IOS 6+ အထက်တွေမှာ MMKeyboard6+ နဲ့ အဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် settings ပြန်ချိန်နည်း(၁)
IOS 6+ အထက်တွေမှာ MMKeyboard6+ နဲ့ အဆင်မပြေ error ထလို့ စိတ်ညစ်နေရတဲ့ အထူသဖြင့် ipad ပိုင်ရှင် ဘောဒါများ အတွက် MMkeyboard 6+ လုံဝ အဆင...
အုပ် စု အ လိုက် ရှာ ရန်
7 online Radio (1)
blog နည်းပညာများ (4)
Cleaner software (2)
facebook ဆိုင်ရာ (1)
gmail gtalk ဆိုင်ရာ (4)
hjsplit ဖြင့်ဖိုင်ဖြေနည်း (1)
i mobile (4)
internet browser ဆိုင်ရာ (4)
internet downloadmanger (6)
iphone ဆိုင်ရာ (5)
mobile ဖုန်းဆိုင်ရာ (26)
Online ငွေရှာနည်း (1)
PC Softwares (11)
Recover softwar (1)
software မြို့ တော် (32)
Speed MP3 Downloader (1)
TRACKS ERASER PRO (1)
video covrerter (4)
wifi password hacking (1)
မြန်မာ Dictionary (1)
အသစ်တင်တိုင်း facebook ကဖတ်ချင်တယ်ဆို like ပေးခဲ့ပါ
မန်ဘာ ဝင်ပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ
Enable Administrator account in Windows 8 & Window...
Samsung Galaxy phone/tablet တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူRoo...
ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ ကွန်ပြူတာကနေ wifi ပြန်လွင်...
ပရေမီယံ အကောက် အပ်ဒိတ်များ
♥♥♥ ဆိုဒ်တော်တော်များများ အတွက် ပရေမီယံ အကောက် အပ်ဒိတ်များ လိုပါက ဒီအောက်က ပုံ ကို ကလစ်နှိပ် သွားပါ ♥♥♥
Latest downloads software
Comodo Internet Security 6.0.264710
IncrediMail2Build 5260
အွန်လိုင်း Movie ကြည့်ရန်
Movie Myanmar Movie
Than Zin Hline
၀ါသနာရှင်များအတွက် PC GAME ဆိုဒ်များ
Just Mediafire Final Games
Baixa Tudo Games
Free Download Pc Games Mediafire & Direct Link
Download Game 12
gmail gtalk ဆိုင်ရာ
internet browser ဆိုင်ရာ
software မြို့ တော်
Myanmar Mobile Users Club
Myanmar Play App Center
အရဟံ ဗဟိ အန္တဇယံ သုဂတံ၊
အမိတံ ဝိရဇံ လလိတံ အတုလံ၊
စရဏံ တိဘဝူပသမံ ယမကံ၊
သုခဒံ သရဏံ ပဏမာမိ ဇိနံ။
Copyright © Zawlin IT World | Powered by Blogger